बिजय शाहीलाई लाग्यो ठुलो झ’ट्का ! वि’वाद बढेपछी झन्डै हा’त हा’लाहा’ल, प्रहरी बोलाउनु पर्यो(भिडियो) – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Video/बिजय शाहीलाई लाग्यो ठुलो झ’ट्का ! वि’वाद बढेपछी झन्डै हा’त हा’लाहा’ल, प्रहरी बोलाउनु पर्यो(भिडियो)
बिजय शाहीलाई लाग्यो ठुलो झ’ट्का ! वि’वाद बढेपछी झन्डै हा’त हा’लाहा’ल, प्रहरी बोलाउनु पर्यो(भिडियो)
कालीकोटः कालीकोटका विजय शाहीले मेमोरी किङ विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । शाहीले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द सम्झिएर भनेपछि भारतका प्रतियोगिलाई पछि पार्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
यसभन्दा अगाडिका विश्व रेकर्डधारी अर्पण शर्माले एक मिनेटमा ४२ वटा शब्द बोलेका थिए भने अर्पणलाई पछि पार्ने भारतका सागर भुजीलाई कालीकोटका विजय शाहीले उछिनेर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि नासाले बोलाएको छ ।
काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । कालीकोट दुर्गम भएकाले पनि विजय शाहीलाई कसैले छिनेका छैनन् । शाहीले अर्पण शर्मा र भारतका सागर भुजीलाई धेरैपछि पारेर ५५ सेकेण्डमा ७० वटा शब्द सम्झेर विश्व रेकर्ड कायम गरेको एक अडियोमा भनेका छन् ।
निर्णायक मण्डलले पनि शाहीलाई विश्व कीर्तिमान घोषणा गरेर प्रमाणपत्र समेत दिएको छ । कालीकोटका विजय शाहीले विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि कालीकोटमा उत्साह छाएको छ । दुर्गम गाउँमा जन्मेका शाहीले गाउँकै विद्यालयवाट प्रमाणपत्र तह पास गरेका छन् । उनले पहिलो पटक चीनमा भएको प्रतिस्पर्धामा प्वाइन्ट ५ ले पछि परेपछि भारतका सागर भुजीले विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए ।
रबी लामिछाने कै गाडि रोकियो, काठमान्डौमा कडा लकडाउन ! न’क्कली पास देखाउनेहरु प्र’ह’रीको फ’न्दा’मा